सामाजिक मिडिया + एनालिटिक्स = गलत Martech Zone
बुधबार, सेप्टेम्बर 8, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यदि मैले तपाईंलाई कुन साइटले तपाईंको साइट, ट्विटर वा फेसबुक लाई बढी यातायात प्रदान गरेको भनेर सोध्नु थियो भने ... तपाईं कसरी यसलाई निर्धारण गर्नुहुन्छ? वेबको बहुमत विश्लेषण प्रयोगकर्ताहरू लग-इन गर्ने थिए र उनीहरूको सन्दर्भ स्रोतहरू हेर्नेछन् र मूल्यको साथ आउनेछन्। त्यो समस्या हो।
केही कम्पनीहरूले केवल "twitter.com" लाई सन्दर्भ स्रोतको रूपमा थप्छ र सोच्दछ कि यसले चाल गर्छ। होइन। ट्विटर डॉट कॉमबाट आएका आगन्तुकहरूको स्ख्या केवल ती व्यक्तिहरू हुन् जसले एक खुला ट्विटर डॉट वेब वेब पृष्ठबाट लिंकमा क्लिक गरेका छन् र यसलाई तपाईंको पृष्ठमा बनाएका छन्। यदि तपाईं मलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, तलको सेगमेंटमा हेर्नुहोस् hootsuite.com र बाट twitter.com:
कम से कम संगHootsuite, तपाईं एक सन्दर्भ साइट देख्नुहुन्छ…। वा तपाईं? ठिक छ, यदि मैले यो प्रयोग गरिरहेको छुHootsuite मेरो Droid वा iPhone मा अनुप्रयोग, म वास्तवमा देख्दिनHootsuite एक सन्दर्भ साइट को रूप मा! वास्तवमा, कुनै पनि लिंक जुन अनुप्रयोगहरूबाट आउँदछ को रूपमा चिनिन्छ कुनै रेफरर बिना प्रत्यक्ष ट्राफिक.
आउच र यो केवल खराब हुँदै गइरहेको छ।
अनुप्रयोगहरूले ट्वीटरवर्स हावी गर्दछ र फेसबुकको साथ पप अप गर्न सुरु गर्दछ। जब हामी सबै मोबाइलमा सर्छौं, हामी सबै मोबाइल अनुप्रयोगहरू र जडानका साथ काम गरिरहेका छौं। म फेसबुकमा कुराकानी गर्न एडियमको प्रयोग गर्छु ... त्यसैले जुनसुकै बेला पनि जब म फेसबुक साथीले मलाई पठाएको लिंकमा क्लिक गर्दछु, यातायात कुनै पनि फेसबुकमा सन्दर्भित हुँदैन। यो एक को रूपमा देखिन्छ कुनै रेफरर बिना सीधा यात्रा.
नतिजाको रूपमा, कम्पनीहरूले अपूर्णमा भर परेर उनीहरूको सामाजिक मिडिया ट्राफिकलाई कम महत्त्व दिइरहेका छन् विश्लेषण। अनलाइन संसारको अधिकांश बहुमतले गुगलको उपयोग गर्ने भएकोले यो कुनै राम्रो हुँदै गइरहेको छैन। यो श build्कास्पद गुगलले निर्माण गर्नेछ विश्लेषण गेटवे मा यसको साथीहरु को लागी फेसबुक or twitter। त्यसोभए के गर्ने कम्पनी हो?
पहिले, तपाइँ तेस्रो पक्षमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ विश्लेषण उपकरण मेरो ग्राहक र वेबट्रेंडमा साथीहरू बिट.लि.को साथ साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् ... एउटा कदम जुन म विश्वस्त छु यसले हल्लाउनेछ विश्लेषण संसार।
नयाँ मा लगानी बिना विश्लेषण प्लेटफर्म, त्यहाँ अझै तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ चीजहरू छन्।
पहिलो तपाईंको साइटमा ट्विटरको आधिकारिक रीट्वीट बटनको प्रयोग गर्नु हो। बटनलाई अभियान कोड समावेश गर्न स्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ जुन तपाईंको बटनमा फिर्ता भ्रमण ट्र्याक गर्दछ ... र त्यसपछि बिट.लाई जस्तै तेस्रो पक्ष प्रयोग गरेर छोटो बनाउन सकिन्छ। म सिफारिश गर्दछु bit.ly को प्रो सेवा अनुकूलन गर्न र आफ्नै छोटो URL प्रयोग गर्न। यदि तपाईंले यो गर्नुभयो भने, मानिसहरूले युआरएललाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्न र आफैंमा छोटो बनाउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ।
दोस्रो भनेको तपाईंको अभियान ट्र्याकिंग क्वेस्ट्रिring्ग URL मा छोटो पार्नु अघि जोड्नु हो। यसले तपाइँलाई अभियानमा ट्विटरलाई स्रोतको रूपमा ट्र्याक गर्न अनुमति दिनेछ र तपाइँलाई पठाइएको कुल ट्राफिकको अधिक सटीक मापन प्रदान गर्न सक्दछ।
यदि तपाईं आफ्नो ब्लग फिडलाई ट्वीटरमा धकेल्नुहुन्छ जस्तो कि एक उपकरणको प्रयोग गरी Twitterfeed, तपाईं गुगल एनालिटिक्स अभियान कोड थप्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नो बिटलाइ खातासँग छोटो पार्नुहोस्। यसले कुनै प्रश्न छोड्दैन कि आगन्तुकहरू ट्विटरफेड मार्फत तपाईंको फिड पुश गरेर तपाईंबाट आएका हुन्।
मैले क्वेरीस्ट्रिंगमा थप्नको लागि फेसबुक कोड जस्तै फेसबुक ह्याक गर्न प्रयास गरेको छैन ... म यस बिन्दुमा प्रभावको बारेमा निश्चित छैन, तर यो सम्भव हुने थियो। यो समस्यामा जान सक्छ जहाँ तपाईंसँग दुई फरक URL हरू लाई मन पराइएको छ, जबकि ... अभियान अभियानको साथ र एक बाहेक।
तलको रेखा यो हो कि तपाईंको साइटले सामाजिक मिडिया स्रोतहरूबाट सोचे भन्दा धेरै धेरै ट्राफिक देखिएको हुन सक्छ। मोबाइल अनुप्रयोगहरू र डेस्कटप अनुप्रयोगहरूले ती भ्रमणहरूको मानहरू तिरस्का गर्छन् र ती आगन्तुकहरू कहाँबाट आउँदछन् भनि निर्धारण गर्न यसले केही थप काम लिन्छ। जबसम्म हामीले यसमा केही उल्लेखनीय सुधारहरू देख्दैनौं विश्लेषण, तपाईंले यस भिन्नतामा ध्यान दिनुपर्दछ।
टैग: विश्लेषणखराब नापप्रत्यक्ष ट्राफिकरेफरल ट्राफिकसामाजिक मिडिया एट्रिब्युशनसामाजिक मिडिया चुनौतिहरुसामाजिक रेफरल यातायातट्विटर सन्दर्भ लिंकहरू
अक्टोबर 4, 2010 बिहान 9:35 बजे
डग, शानदार पोस्ट - यो सही समस्या हो जुन मैले हालसालै ध्यान दिइरहेको छु। तपाईंले TwitterFeed प्रयोग गरेर GA ट्र्याकिङ कोड जोड्न सक्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गर्नुभयो तर त्यो विकल्प कहाँ छ भनेर म देख्न सक्दिन...
जनवरी 6, 2011 2:07 बजे
डग, म विश्वास गर्न सक्दिन कि यसमा कसैले टिप्पणी गरेको छैन। म वास्तवमा अहिले एक धेरै समान पोष्ट लेख्दै छु र मलाई याद छ कि म यो सन्दर्भ गर्न चाहन्छु। लेख को लागी धन्यवाद। म मेरो पोस्टबाट यसलाई फिर्ता लिङ्क गर्न निश्चित हुनेछु।
जुन 29, 2011 मा 2: 46 PM
म पनि स्तब्ध छु कि कसैले यो महान पोस्ट मा टिप्पणी गरेन। म स्टार्टअपको लागि काम गर्छु (http://www.growsocially.com) र हामी यो धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दैछौं।